Ku saabsan Ryuko Park
Gurigii hore waxaa la dhisay 1948-54 dagaalka ka dib, qofka wax soo dhisaya oo ka badbaaday duqeynta waxaa la dhisay 10, 1938-guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Seiryusha.
Intaa waxaa dheer, Ryuko wuxuu ku abuuray "Bomb Sanka no Ike" Ryuko Park inuu noqdo balli ka mid ah qaybta la degan yahay ee lagu burburiyey duqeyntii cirka ee dhamaadka dagaalka.
Ryuko Park waxaa hagaya shaqaalaha xusuusta maalinta furitaanka.Waqtiga macluumaadka waa 10:00, 11:00, 14:00 saddex jeer maalintii.
(Fadlan la soco in albaabku xiran yahay oo si xor ah uma arki kartid inta lagu jiro waqtiga hagida.)
* Waqtiga xaadirka ah, hagida la socota faallooyinka waa la joojinayaa, faallooyinka waa la qaybin doonaa, waxaana la bixin doonaa booqasho bilaash ah oo 30 daqiiqo ah.
Waan ku qanacsanahay fahamkaaga iyo wada shaqeyntaada.
U heellan qaabeynta iyo nolosha
Waad arki kartaa sida ay Ryuko uga go'an tahay naqshadeynta, sida 60 tatami mat atelier oo si gaar ah u ah iftiinka maalinta, iyo laamiga dhagaxa ah ee lagu daro miisaan sida masduulaagii oo cirka sare ku dheela.
Dhagxaanta dhagxaanta ah ee isku xiraya gurigii hore iyo kan xardhan
Muuqaalka afarta xilli
Dhirta xilliyeed sida plum, ubaxa cherry, iyo xilliga dayrta midabka Ryuko Park.Waad taaban kartaa aragtida Ryuko ee farshaxanka, oo lagu sheegay inay tahay "beeritaanka agab gacmeed" beerta dhexdeeda.
Balli "Bomb Sanka" xilligii ubaxeedii cherry
Guri hore iyo dayrka hore ee xilliga dayrta caleenta